Nosy Manodidina : Efa misy ny fifampiresahana mivantana -
AccueilSongandinaNosy Manodidina : Efa misy ny fifampiresahana mivantana
Mbola mitana ny sain’ ny besinimaro ny mikasika ny tokony hahazoan’ i Madagasikara ireo nosy kely manodidina izay feno harena, ka hahazoantsika tombony maro. Hatreto aloha izany dia tapaka nandritra ny fivoriambe iraisam-pirenena fa hiaraha-mitantana ireo nosy ireo, ary izay indrindra no hirosoana amin’izao fotoana izao. Raha tsiahivina ihany koa dia maro ireo fiarahamonim-pirenena no miady mafy manatanteraka fampahafantarana amin’ny eo anivon’ny iraisam-pirenena amin’ny filazana fa an’i Madagasikara manokana ireo Nosy manodidina ireo. Ny tsara ho fantatra mikasika ny fitakiana ireto Nosy manodidina ireto dia ny hoe hatramin’ny nahazoana fiahaleovantena dia mbola tsy nisy mihitsy fifampiresahana mivantana eo amin’ny tompon’andraikitra Frantsay sy Malagasy, fa dia nihemotra hatrany foana ihany koa ny fandinihina ny raharaha rehefa mandeha ny fivoriana iraisam-pirenena. Raha tsiahivina izao dia efa tamin’ ny taona 1973 ny Amiraly Didier Ratsiraka, izay filoham-pirenena malagasy no nitaky ireo nosy ireo: l’île Europa, Bassas da India, l’île Juan de Nova et les îles Glorieuses, saingy tsy misy nisy mihitsy ny fifampiresahana mivantana tamin’izany.
Aty amin’ny taona 2018 kosa vao sahy nitsangana ny fanjakana malagasy nifampiresaka tamin-dry zareo frantsay ny amin’ny tokony hahazoan’ i Madagasikara ireo nosy kely manodidina ireo. Raha tsiahivina moa ny nambaran’ ny Quai d’Orsay manoloana ity raharaha ity, raha nanontanian’ny Mediapart dia ny hoe “ Fantara ny toeran’i Frantsa mikasika io raharaha io, tsy vaovao rahateo io resaka io. Saingy kosa dia azo tanterahina ny fifampiresahana anatin’ny fanajana ny lalàna iraisam-pirenena”. Izay indrindra no antony nanosika ny teo anivon’ny fitondram-panjakana nandroso ny resaka amin’izany, izay ny minisitry ny Raharaham-bahiny Malagasy mivantana henry Rabary-Njaka no nihaona sy niresaka mivantana ihany koa tamin’ ny minisitry ny Raharaham-bahiny frantsay. Vokatry ny fifampiresahan’ny roa tonta noho izany dia misy ny efa fifampiresahana mandeha amin’ izao fotoana raha ny fanazavana izay nentin’ ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy omaly. Tanjona amin’ny ezaka tahaka izao moa, dia ny hiverenan’ireo nosy kely ireo ho amin’i Madagasikara.